Taliska AFRICOM oo AMISOM ku dhaliilay in ay xakameyn waayeen awoodda Al Shabaab.
Saturday January 22, 2022 - 11:58:32
Sarkaalka ugu sarreeya ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa markale kale walaac ka muujiyay awoodda Jihaadiyiinta ka halgama geeska qaaradda Afrika.
Taliska AFRICOM ayaa sheegay in awoodda jihaadiga ee Soomaaliya ay tahay mid aad usarrayso islamarkaana ay baqdin ku beerayso reergalbeedka iyo dowladaha ku lugta leh duullaanka dalkan lagusoo qaaday.
Jeneraal Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa ciidamada AMISOM ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen xakameynta awoodda Al Shabaab.
Isagoo wareysi siinayay Idaacadda Codka Mareykanka ayuu Stephen Townsend ku caddeeyay in sedax arrin ay sabab u yihiin sii xoogeysashada Al Shabaab kuwaas oo uu ku kala sheegay 1-AMISOM oo aan wax dhaqaaq ah sameyn 18-kii bil ee lasoo dhaafay 2-khilaafka siyaasadeed ee ka dhax aloosan hoggaanka DF-ka iyo caabuqa Covid19.
Dowladda Mareykanka ayaa sanadadii lasoo dhaafay xoojisay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero 'Argagaxisada' ee ka socda Soomaaliya iyadoona kumanaan kun oo calooshood ushaqeystayaal Afrikaan ah u adeegsanaysa ka hor tagga ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Duullaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa 14 sana jirsaday walina ma muuqato guul uu shisheeyuhu ka gaaray lagaallanka Jihaadiyiinta.
New York Times "Soomaaliya madaxweyne ayay dooranaysaa laakin awoodda dhabta ah waxay gacanta ugu jirtaa Argagaxisada" [Warbixin].
Muxuu salka ku hayay socdaalkii Taliyaha AFRICOM uu ku tagay magaalada Hargeysa.
Daawo Tartan Loo Qabtay Ciidamada Xarakada Al Shabaab.